သင်ရဲ့ နာမည်မှာ ”K” ပါခဲ့သော်…. – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > သင်ရဲ့ နာမည်မှာ ”K” ပါခဲ့သော်….
သင်ရဲ့ နာမည်မှာ ”K” ပါခဲ့သော်
သင့်ရဲ့နာမည်မှာ ”K” ပါခဲ့သော် ရယ်လိုက်ရင် အသေချစ်ဖို့ကောင်းတာ 9+(နာမည်မှာ ”K” ပါတဲ့သူတွေရဲ့ အဓိက လျုှိ့ဝှက်လက်နက် တစ်ခုပဲ)
လူတစ်ဖက်သားကို ကူညီတတ်တဲ့စိတ်က မွေးရာပါပဲ(အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုမှ အသုံးချသွားတဲ့သူတွေက ရှိသေး)သဘောထားကြီးပြီး ခွင့်လွှတ်လွယ်တယ်(ဒေါသထွက်လည်းခဏပဲ ပြီးရင်သူမဟုတ်သလိုနဲ့)နောက် နာမည်မှာ ”K” ပါနဲ့သူတွေရဲ့အားသာချက်ကခလေးဆန်လွန်းတဲ့အပြုအမူလေးကြောင့် ချစ်မိသွားမယ်
အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ယောင်နေတဲ့ ပုံစံလေးက ချစ်စရာလေး(မယုံရင် အသာလေးခိုးကြည့် ခွိ ရလွန်းလို့ အူပါတက်တာ)၊ရုပ်တည်ချက်က တစ်လောကလုံး ရှာကျွေးထားရသလိုနဲ့(ပေါပြီဟေ့ဆို ဘယ်သူမှလိုက်မမှီစေရဘူး သေသွားမယ်)
အချစ်ရေး ကံမကောင်းတာလေ ဘာဖြစ်မှန်းမသိ(အချစ်ကြောင့် သိပ်ပျော်ရွှင်နေရတာက ရှားတယ်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်မှ မဖြစ်ရရင် ဘဝက မပြီးဘူး)။
သင်ရဲ့ နာမည်မှာ ”K” ပါခဲ့သော်သင့်ရဲ့နာမည်မှာ ”K” ပါခဲ့သော် ရယ်လိုက်ရင် အသေချစ်ဖို့ကောင်းတာ 9+(နာမည်မှာ ”K” ပါတဲ့သူတွေရဲ့ အဓိက လျုှိ့ဝှက်လက်နက် တစ်ခုပဲ)
လူတစ်ဖက်သားကို ကူညီတတ်တဲ့စိတ်က မွေးရာပါပဲ(အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုမှ အသုံးချသွားတဲ့သူတွေက ရှိသေး)
သဘောထားကြီးပြီး ခွင့်လွှတ်လွယ်တယ်(ဒေါသထွက်လည်းခဏပဲ ပြီးရင်သူမဟုတ်သလိုနဲ့)နောက် နာမည်မှာ ”K” ပါနဲ့သူတွေရဲ့အားသာချက်ကခလေးဆန်လွန်းတဲ့အပြုအမူလေးကြောင့် ချစ်မိသွားမယ်။(နေတတ်သလိုနေနေတာလေးကိုကအသဲယားစရာလေး)တွေးတွေးပြီးငိုတတ်တဲ့”Style”ကကြွေလောက်တယ်(ဝမ်းနည်းစရာတစ်ခုဆို”Version”ပြန်ပြန်မြှင့်လိုက်ရမှ)။
အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ယောင်နေတဲ့ ပုံစံလေးက ချစ်စရာလေး(မယုံရင် အသာလေးခိုးကြည့် ခွိ ရလွန်းလို့ အူပါတက်တာ)။
ရုပ်တည်ချက်က တစ်လောကလုံး ရှာကျွေးထားရသလိုနဲ့(ပေါပြီဟေ့ဆို ဘယ်သူမှလိုက်မမှီစေရဘူး သေသွားမယ်)အချစ်ရေး ကံမကောင်းတာလေ ဘာဖြစ်မှန်းမသိ(အချစ်ကြောင့် သိပ်ပျော်ရွှင်နေရတာက ရှားတယ်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်မှ မဖြစ်ရရင် ဘဝက မပြီးဘူး။
Previous Article ထမင်းကျွေးထားမယ့်သူမရှိလို့ သားအရင်းဆီကနေအတိုးနဲ့ ယူရတဲ့အမေရင်းSee more
Next Article အနာဂတ်မှာ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေကို လက်ထပ်ခွင့်​တောင်းရနိုင်